Myanmar Web Design & Development Company - WebsiteDesign.com.mm
ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာ အချိန်တစ်မိနစ်တိုင်းကို Website အသစ်ပေါင်း (၁,၃၇၂) ခု ထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာ သင်သတိပြုမိပါသလား?
Did you notice that there are 1,372 new websites coming up every single minute of the day?
ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Website လေးတစ်ခုတောင်မှ မရှိခဲ့ရင် လူကြီးမင်းရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနေရမှာ အသေအချာပါပဲ။
You missed opportunities if you did not haveagood website that represents your company
WebsiteDesign.com.mm မှ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Website များကို သင့်တင့်မျှတသော နှုန်းထားများနဲ့ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးနေပါတယ်။
We help you build creative websites that reflectsaperfect image of your business
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ Website ပေါင်း သန်း (၁,၈၀ဝ) ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး၊ အချိန်တစ်မိနစ်တိုင်းကို Website အသစ်ပေါင်း (၁,၃၇၂) ခု ထွက်ပေါ်နေပါတယ် (Internet Live Stats)။ WebsiteDesign.com.mm မှ လူကြီးမင်းတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Website များကို သင့်တင့်မျှတသော နှုန်းထားများနဲ့ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ Website တစ်ခုဟာ...
In today’s world, there are 1.8 billion websites which 1372 new websites coming up every single minute of the day (REF: Internet Live Stats). Asabusiness, you must haveawebsite that represents the front face of your company. In fact, you loose online business opportunities if you didn’t have one. We are the A-team Web Design and Development Company in Myanmar located in …
အပြည့်အစုံသို့ Read More >>
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Logo ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ.… KFC, NIKE တို့လို Logo တွေဟာ မှတ်မိရလွယ်ပြီး၊ ဘာလုပ်ငန်းရယ်ပါလို့ ရှင်းပြစရာ မလိုလောက်အောင် အဓိပ္ပါယ် ရှိကြပါတယ်။ဖန်တီးမှုပါဝင်တဲ့ ဒီဇိုင်းပေါ်မှာ လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်ကိုတွဲဖက်သုံးစွဲခြင်းကသာ ပြည့်ဝတဲ့ ရသတစ်မျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။လွယ်မယောင်နဲ့ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့နက် ဆိုသလို...
Great logo design requiresacomplex mixture of design skills, creative theory and skillful application. A good logo allows easy recognition, versatile, memorable and it isapart of your branding scheme. Starts from the logo,anice graphic allows interpreting thousand of words, consideredasubset of visual communication. Our creative professionals can help …
အင်တာနက်တွင် ကြော်ငြာခြင်း အမျိုးမျိုး
လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ပတ်အတွင်း ကမ္ဘာပတ်ဖို့ မလွယ်ကူလှပေမဲ့၊ ကိုယ့်စီးပွားရေးရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကတော့ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာပတ်လို့ ရပါတယ်။ Customer ကို အပြေးအလွှားလိုက်ရှာရတဲ့ခေတ် ကုန်ဆုံးပြီး၊ Customer က လူကြီးမင်းဆီ တည့်တည့်မတ်မတ် ရောက်ရှိလာစေတဲ့ အင်တာနက်ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက လူကြီးမင်းတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်...
Studies have shown the increasing number of customers uses the Internet toapreliminary products and services research before making the final purchase decisions. With the power of Internet advertising, you can get customers look for you straight and you no longer need to chase them hard like before. It is ideal for businesses with all small and large-scale distribution …